Kutaa Dimshaasha keessatti, galmee olkaa'uuf duraantaa qindaa'ootaa filachuu dandeessa, akkasumas duraantaa dhangii faayilii filachuu dandeessa .
Yoo Qindaa'inoota fayyadamaan dangaa'an galmee wajjin fe'i filatamuu baate, qindaa'inootni fayyadamaan daanga'an kan armaan gadii ammallee ni argamu:
Yoo dandeessifame, qindaa'inootni maxxansaa galmee wajjin fe'amu. Kun akka galmeen maxxansaa fagoo jiru irratti maxxansamu taasisa, yoo ati maxxansaa ofiin gongee dhaamsaa maxxansaa keessatti jijjiiruu baatte. Yoo dandeessifamuu baate, maxxansaan kee durtii galmee kana maxxansuuf si gargaara. Qindaa'inootni maxxansicha kanaa diqalli kun to'atamus baatus galmee wajjin kuufamu.
Yeroo galmee olkeessu galmee fooyya'aa duraanii akka dilbii garagalchaatti olkaa'a. Hoggayyuu LibreOffice garagalcha dilbii uumu, garagalchi dilbii duraanii bakka bu'a. Garagalchi dilbii fufaa .BAK argata.
Dirqaalli kun filannoo duraantaa hirkataa sirna faayilii fi interneetii irratti kan URL teessessu si dandeessisa . Teessessuun hirkataa kan danda'amu yoo maddi galmee fi galmeen wabeeffame lachanuu ooftuu tokko irra ta'an qofa.
Sanduuqa filannoo kana olkaa'umsa hirkataa kan URLs tiif sirna faayilii keessatti filadhu.
Sanduuqa filannoo kanaolkaa'umsa hirkataa URLs Interneetiif filadhu.
Yeroo galmee sooftweerii haaraa keessatti olkeessu,akka galmee gita ODF 1.2 haaraan yookiin kan duraa 1.0/1.1 dhaan olkeessu filachuu dandeessa.
Yeroo ammaa, dhangiin ODF 1.2 (Baaya'ate) faayilii Fakkaasaa fi Impireesii yaada qabaachuuf kakaasa. Yaadni kun Saagii - Yaada mosajjii fooyyaa'aa keessatti saagamuu danda'a.Yaadni kun kan badu faayilii kana osoo mosaajjii fooyyaa'aa hin fe'in dura kan mosaajjii fooyyaa'aa isa ammaatiin olkaa'ama.
Kubbaaniyyoonni yookiin dhaabbattoonni muraasni galmeelee ODF gita ODF 1.0/1.1 dhaan barbaaduu danda'u. Sanduuqa tarree keessa olkaa'uuf gita sana filachuu dandeessa. Gitni dullachi kun amaloota haaraa siif kuusuu hin danda'u, kanaafis amma danda'ametti gitni haaraa ODF 1.2 (Babalkdhata) ni jajjabeeffama.